Beta-Arbutin afaka manakana ny fanangonan-karena be ny tyrosinase ao amin'ny cortex. Manana bleaching-tahaka ny vokany eo amin'ny hoditra. Beta-Arbutin azo ampiasaina mba hisorohana ny hoditra loko sy ny tandra amin'ny hoditrao, izay mahery noho ny kojic asidra sy ny ascorbic asidra. Arbutin dia mampihena ny fahasimbana ny proteinina, toy ny insuline, in vitro, ny miato sy mampihena ny fahasorenana ny hoditra sy ny volo ny loko surfactants na ny volo, ary koa mampirisika ny fitomboan'ny sela sy ny hoditra manampy manasitrana fery. Human sela amin'ny hoditra ny vi ...
Sahy miteny: 99,0% min
Čas No .: 497-76-7
Beta- Arbutin afaka manakana ny fanangonan-karena be ny tyrosinase ao amin'ny cortex. Manana bleaching-tahaka ny vokany eo amin'ny hoditra. Beta- Arbutin dia azo ampiasaina mba hisorohana ny hoditra loko sy ny tandra amin'ny hoditrao, izay mahery noho ny kojic asidra sy ny ascorbic asidra. Arbutin dia mampihena ny fahasimbana ny proteinina, toy ny insuline, in vitro, ny miato sy mampihena ny fahasorenana ny hoditra sy ny volo ny loko surfactants na ny volo, ary koa mampirisika ny fitomboan'ny sela sy ny hoditra manampy manasitrana fery. Human hoditra sela in vitro fanandramana nampiseho fa Beta-Arbutin afaka hanatsarana ny sela be ny tahan'ny fitomboana.
Bika Aman 'endrika: White manjelanjelatra.Mangatsakatsaka vovoka
sahy miteny: Tsy latsaky ny 99,0%
sisa amin'ny ignition: Tsy mihoatra ny 0,5%
fatiantoka paharitry: Tsy mihoatra ny 0,5%
mpandrendrika teboka: 199-201 (+ 0.5) ℃
manokana Optical fihodinan'ny: [α] D20 = -66 ° + 2 °
pH (1% rano vahaolana): 5.0 - 7.0
mazava eo amin'ny rano vahaolana: Mangarahara, colorless, tsy misy zavatra mihantona
rock mavesatra: Tsy mihoatra ny 10 ppm
IPV: 1515cm-1 1220cm- 1 1050cm-1 + (5-8) sm-1
arsenika: Tsy mihoatra ny 2 ppm
Hydroquinone: Tsy mihoatra ny 10 ppm
bakteria: Tsy mihoatra ny 300 cfu / h
Holatra: Tsy mihoatra ny 100 cfu / h
Previous: High Quality for Pharmaceutical Chemicals Agent - Codonopsis Pilosula Extract – Cosroma Biotech
beta arbutin inci
beta arbutin inci anarana
beta arbutin vovoka
beta arbutin Whitening
inona no beta arbutin